Black Stork - Iintaka - Mzantsi Afrika
iMicromammals, izilwanyana ezinwabuzelayo, i-shellfish kunye nezinambuzane zigqiba ukutya, kodwa iintlanzi zenza inxalenye yazo yokutya.
Umntwana osemnyama we-Stork ufihla umhlophe kwaye unomlenze obomvu ophuzi okanye obomvu. Uninzi lwawo luphakame olufanayo, kuphela abo bachithwa kamva okanye babulala kunoko bude. Abanye abaselula ababuthathaka bayafa kwaye baphoswa ngaphandle kwidleke. Ekuqaleni iintaka ezincinci zibuthathaka kwaye azikwazi ukuhlala ngokuqhelekileyo. Ngeli xesha bahlala kunentsiba, benomsindo, benobundlobongela, ngakumbi xa umntu efika kufuphi neendlwana zawo. Iintsiba zazo zikhula ngokupheleleyo xa zineminyaka eyi-46-50 ubudala kwaye ziya khula, ngaphandle kokuba zibomvu, zingabonakali, kwaye imilenze yazo ibomvu. Abaselula bashiya isidleke xa beneminyaka eyi-60-66 ubudala. Omnye umntwana ukhuliswe kunyaka.
Ekuqaleni abazali banikela ukutya kwa bancinci, kamva bayithatha kwimimfono yabantu abadala kunye nasesidlekeni. Ukutya kwabo kuyahluka kakhulu: iintlanzi ezincinci, amaqanda, icikilishi, iimpuku, iindwendwe, i-shrews, iintlobo zeentaka (ikakhulukazi iintaka eziqhekeza emhlabathini), izinambuzane ezihlala emanzini kunye nezibungu. Iingqayi ezincinci zondla i-mollusca, kwiinambuzane ezinkulu ezihlala kwingca, i-moss, kwaye, ngokukodwa, izityalo zamanzi. Emva kokuba abatsha abasebekhulile, intsapho yamaNtshonkcoza amnyama ifuna ukutya kude nendlu.
Ngokungafani ne-White Stork, intaka evela kwiindawo ezisemaphandleni kunye nee-steppes, iStork saseNtshonalanga singaphezu kwazo zonke iintlobo zehlathi. Bahlala emahlathini amadala ahlala kuyo apho isidleke sifakwe emthini omkhulu, ngokuqhelekileyo sisondele kwindawo evulekile (imithambeka, amahlathi acacileyo), okubenza bakwazi ukufikelela lula. Intsimi yabo yokuzingela iqukethe imilambo kunye nemifula encinane, ngamanzi emibhobho kunye namadlelo kunye neentlobo eziphantsi. Amaqabane ahlale eekhilomitha eziliqela ngaphandle komnye.
Iziqithi zaseMzantsi Afrika, kunye neenxalenye zeYurophu.